Waxaan ku arkay Ciise adiga, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan qabtey shaqadaydii anigoo iibiye ah dukaan isboorti waxaanan xiriir saaxiibtinimo la yeeshay macaamiil. Waxay udhowaad ahayd inay tagto oo ay mar kale ii soo jeesato, way i eegtay oo waxay igu tidhi: "Waxaan ku arkaa Ciise adiga."
Maan hubin sida looga fal celiyo. Hadalkani ma ahan oo keliya kuleylka qalbigayga, laakiin wuxuu kiciyay fikradaha qaarkood. Maxaad aragtay? Qeexitaankeyga cibaadada ayaa had iyo jeer sidan ahaa: Nolosho ka buuxaan iftiinka iyo jacaylka Ilaah. Waxaan rumeysanahay inuu Ciise i siiyay waqtigan si aan ugu sii wado si firfircoon oo aan ku hogaamiyo noloshan cibaadada oo aan isaga u ahaado nal ifaya.
Weligey sidaas ma dareemin. Markii aan ku koray iimaanka, fahamkayga cibaadada ayaa waliba koray. Markii aan sii koray oo aan ku dhex shaqeeyey ururkeyga, waxaan ogaadey in cibaadadu aysan aheyn oo keliya heesaha ammaanta ama waxbaridda sida ilmo ahaan. Cibaadada macnaheedu waa qalbi qumman oo ku hoggaamiyo nolosha Eebbe i siiyay. Cibaadadu waa jawaabta aan u bixiyo jacaylka Ilaah ee jacaylka maxaa yeelay isagu wuu igu nool yahay.
Halkan waxaa ku yaal tusaale: In kasta oo aan had iyo jeer aaminsanahay in ay muhiim tahay in gacanta loo maro gacan qabashada abuurka - ka dib oo dhan, waa sababta jiritaankeenna - waxay qaadatay waqti yar ka hor intaanan gaarin inaan la yaabay oo aan ku farxay Ilaah caabuda oo ammaana abuurista. Kaliya maaha kaliya eegashada wax qurxoon, waxayse ku saabsan tahay ogaanshaha in Abuuraha jecel ee u abuuray arrimahan inuu iga raalli noqdo oo markaan ogaado, inaan caabudo oo ammaano Ilaahay.
Asalka cibaadadu waa jacayl, maxaa yeelay Ilaah baa i jecel, waxaan doonayaa inaan isaga u jawaabo markaan u jawaabona waan caabudaa. Markaa waxay ku leedahay warqadda ugu horreysa ee John: "Aynu jeclaano, maxaa yeelay isagaa hore noo jeclaaday" (1 Yooxanaa 4,19). Jacaylka ama cibaadadu waa falcelin gebi ahaanba caadi ah. Haddii aan Ilaah ku jeclahay ereyadayda iyo hawlahayga, waan caabudeeyaa oo tixraaca inta aan noolahay. Erayadii Francis Chan: "Walaacayaga ugu weyn ee nolosha waa inaan ka dhigno waxa ugu weyn oo aan tixraacno." Waxaan rabaa in noloshayda ay si buuxda ugu kala baxdo isaga oo taas maskaxda ku haya ayaan isaga ku caabudee. Sababtoo ah cibaadadaydu waxay ka turjumaysaa jacaylka aan u qabo isaga, waxay u muuqataa dadka hareerahayga ah mararka qaarkoodna aragtidan waxay u horseedaa jawaab celin sida macaamiisha dukaanka ku jirta.
Falcelinteedu waxay i xusuusisay in dadka kale ay gartaan sida aan ula dhaqmo. Sida aan ula macaamilo dadka kale ma aha qayb ka mid ah cibaadadayda, laakiin sidoo kale waa mid ka tarjumaya cidda aan caabudo. Shaqsigeyga iyo waxa aan iftiimiyo sidoo kale waa nooc cibaado ah. Cibaadadu sidoo kale waxay ka dhigan tahay inaad ugu mahadceliso badbaadiyahayga oo aan ula xiriiro isaga. Noloshii la i siiyay, waxaan isku dayaa intii karaankeyga ah in iftiinkiisu gaaro dad fara badan oo aan had iyo jeer wax ka barto isaga - ha noqoto akhriska maalinlaha ah ee Kitaabka Quduuska ah inuu u furnaado wax ka qabashadiisa nolosheyda, iyo tan dadka ku jirta Tukashada nolosha ama diiradda saaraya waxa runtii muhiim u ah iyadoo la heesaayo ammaan. Markaan gaariga ku heesto, fekerkeyga, shaqada, sameynta seddexleyl ama aan ka fiirsado heesaha ammaanta, waxaan ka fekeraa kan naf i siiya oo aan caabudo isaga.
Cibaadadayda waxay saameyn ku leedahay xiriirka aan la leeyahay dadka kale. Haddii Ilaah yahay guluubka cilaaqaadkeyga, wey ixtiraami doontaa oo weyneysaa iyaga. Saaxiibkeyga ugu fiican iyo anigu marwalba waan u duceyneynaa ka dib markii aan waqti wada qaadannay iyo ka hor inta aanan kala go'no. Markaan eegno Ilaah iyo rabitaanka doonistiisa, waxaan isaga ugu mahadcelineynaa nolosheena iyo xiriirka aan la wadaagno. Sababtoo ah waxaan ognahay inay qayb ka tahay xiriirkeenna, mahadnaqeenna saaxiibtinimadayadu waa qaab cibaado.
Waa wax la yaab leh sida ay u fududahay in cibaadada la caabudo. Markii aan ku casuumo Ilaah fikradayda, qalbigayga iyo noloshayda - oo aan ka helo joogitaankiisa cilaaqaadkeyga maalinlaha ah iyo qibradeyda - cibaadadu waa u fududahay sida loo doorto isaga inuu ku noolaado oo jeclaado dadka kale siduu isagu yeelo. Waxaan jeclahay ku noolaashaha nolol cibaadada iyo ogaanshaha in Eebbe doonayo inuu ka mid noqdo noloshayda maalin walba. Waxaan badanaa weydiiyaa "Ilaahow sidee ayaad ii dooneysaa inaan u gudbiyo jacaylkaaga maanta?" Si kale haddii loo dhigo: "Sidee ayaan maanta kuu caabudi karaa?" Qorshayaasha Ilaahay aad ayey uga weyn yihiin kuwa aan malayn karin. Isagu wuu yaqaan dhammaan faahfaahinta nolosheena. Wuu ogyahay in ereyada macmiilkan ay aniga laftoodu xuntahay ilaa maantadan oo ay gacan ka geysteen waxaan ula jeedo cibaadada iyo micnaha ay tahay in lagu noolaado nolol ay ka buuxaan ammaan iyo cibaado.
Waxaa qoray Jessica Morgan